चिनियाँ राष्ट्रपतिका लागि बुक गरिएको सोल्टी होटेलको भाडा कति ? – ताजा समाचार
चिनियाँ राष्ट्रपतिका लागि बुक गरिएको सोल्टी होटेलको भाडा कति ?
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका लागि काठमाडौंको पाँचतारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा पुरै रिजर्भ गरिएको छ। २ सय ८२ वटा कोठा भएको साेल्टी होटल सीको भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले तीन दिनका लागि बुक गरेको छ ।
सुरक्षाका कारण होटेलमा अन्य सर्वसाधारणलाई बस्न नदिने गरी शुक्रबारदेखि आइतबारसम्मका लागि सबै कोठा बुक गरिएको हो । बुक गरिएका २ सय ८२ वटा कोठामा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग आउने प्रतिनिधिमण्डल मात्र बस्नेछन्। उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै होटलमा रहेका उपहार पसलहरू पनि बन्द हुने भएको छ।
सोल्टी होटेलमा एउटा कोठाको एक दिनको करिब १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जसअनुसार सबै कोठाको तीन दिनको भाडा लगभग एक करोड २७ लाख रुपैयाँ होटेललाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई रात्रिभोजसमेत सोल्टी होटेलमै दिनेछिन् । होटलले उच्च पदस्थका लागि पहिल्यै बुक भएकाले केही समय अघिदेखि नै निर्धारित मितिका लागि बुकिङ लिन छाडेको थियो। माथिको लागतमा होटलको कोठाको भाडा मात्र जोडिएको हो । त्यसमा रात्रिभोजको खर्च र चिनिया प्रतिनिधिमण्डलको खाना खर्च जोडिएको छैन । यो सबै जोड्दा नेपाल सरकाले सोल्टी होटललाई २ देखि अढाई करोड रुपैया तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सेनाको गस्ती सुरू, चिनियाँ सैनिक सहित ४ तहको सुरक्षा घेरामा रहनेछन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी
काठमाडौं, २५ असोज । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउने भएपछि राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । शनिबार बिहानैदेखि नेपाली सेना ब्यारेकबाट निस्किएर मुख्य मुख्य सडकमा गस्ती गरिरहेको छ । सी हिड्ने मुख्य सड कहरु विशेष निगरानीमा राखिएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रपति सीको सुरक्षाका लागि ४ तहको सुरक्षा घेरा निर्धारण गरिएको छ । पहिलो घेरामा नेपाली सेना, दोस्रोमा नेपाल प्रहरी, तेस्रोमा सशस्त्र प्रहरी बल र चौथोमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सादा पोशाकका सुरक्षा कर्मी रहनेछन् । साथै चीनबाटै आएका सेना र विशेष कमाण्डो समेत सी को साथमै रहने बताइएको छ ।
सुरक्षालाई नै मध्यनजर गरी सडकमा ट्राफिक प्रहरीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढाइएको छ । मुख्य सडकमा रुट नै बदलेर सवारी सधान डाइभर्टको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले सवारी साधनको जाँचमा समेत कडाइ गरेको छ । साथै सडकमा जथाभावी हर्न बजाउन समेत निषेध गरिएको छ ।